FINDENEGRO - Fur mudada xaadiritaanka | Laga soo bilaabo Linux
FINDENEGRO - Fur mudada xaadiritaanka
fanta | | Noticias
Ka dib markii #findenegro lagu shaaciyey DesdeLinux 5 bilood ka hor, waxay dib ugu laabanaysaa culayskii waxa hadda loo yaqaan #findenegro. Findenegro waa a wadahadalo bilaash ah iyo aqoon isweydaarsiyo is-maamusho oo aad si xor ah uga qayb qaadan karto.
Goorma? Dhammaadka usbuuca Oktoobar 17-19, waxaan haysan doonnaa dhammaad usbuuca si aan ula wadaagno aqoonta, dhammaadka usbuuca barnaamijyada bilaashka ah, amniga kumbuyuutarka iyo ugu dambeyn usbuuc dhammaadka jawi wanaagsan.
Xagee Halkan shabaqa
Sideed kuheli kartaa wada hadaladan Findenegro?
Fagaarayaashu waa xaddidan laakiin bilaash ah. Sida loo helo boos waa adoo u diraya emayl hola@elbinario.net adoo si sax ah tan ugu dhigaya maadada iyada oo aan la helin calaamadaha oraahda "MEGUSTAELFINDENEGRO".
Ka dib rarida, waxay kuu soo diri doonaan macluumaad ku saabsan sida loo maro sidan oo kale usbuuca oo dhan. Barnaamijka aqoon isweydaarsiga iyo wadahadalka waa sida soo socota:
Jimcaha 17 - SSHD - Ka hadal sida loo sugo server-ka SSH.
Jimcaha 17 - SQLMap - Ku rakib Xisbiga iyo fikradaha aasaasiga ah ee lagu maareeyo SQLMap
Jimcaha 17 - PeerTV - Baro Ingiriisiga adoo dejinaya telefishankayaga P2P-ka-dalbashada ah ee la concha habeenkii
Sabtida 18 - AmayaOS - Nidaam hawlgal ee kombiyuutarradii hore
Sabtida 18 - BAMBAR - Shabakadda bulshada ee bilaashka ah
Sabtida 18 - Guri-dhise TOR - Samee adeege guri oo aan la aqoon oo leh toor.
Sabtida 18 - UFONet - Weerarada DDoS iyagoo adeegsanaya vectors "Open Redirect" oo ka socda codsiyada websaydhka saddexaad
Axad 19 - NMAP - Bilaabida skaanka dekedda Nmap
Axad 19 - Colaadaha - Daaweynta isku dhaca adduunka Hacker
Axad 19 - Shabakado Bilaash ah - Wadada dheer ee shabakadaha xorta ah
Axad 19 - Ecoin - Ka hadal ecoin cryptocurrency
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » FINDENEGRO - Fur mudada xaadiritaanka
Waxay umuuqataa mahadsanid caarada.
Hagaag, runti waa qabow! Mahadsanid!
Ku jawaab Rarellano
Jadwalka dalkee u dhigma? Waxaan ka imid Uruguay
Ku jawaab ceso
Waxaan isku dayi doonaa inaan xaadir ka ahaano dhamaantood. Aad u xiiso badan. Aad baad u mahadsantahay
Wanaagsan !! Waxaan noqon doonaa dhegaysi inaan ka qayb galo !! xD
Ku jawaab lfelipe
Waan ka xumahay macluumaad la'aanta ku saabsan jadwalka. Jadwalka wuxuu ka yimid Spain in kastoo dadka wada hadalka bixiyaa aysan ka soo jeedin halkaas.
Sidaa darteed jawaabta oo gaaban waa: UTC + 1 (dhowr saacadood ka yar halkaa, halkan waxaan joognaa galabtii / habeenkiina inbadan oo idinka mid ah markaan cunno inbadan ama ka yar taas oo kuxiran wadanka).
Jawaabta dheer si loo fahmo sababta aaga waqtigaas:
In kasta oo Isbaanishku juquraafi ahaan ku sugan yahay aagga u dhiganta Waqtiga Yurubta Galbeed (UTC + 0), haddana wuxuu xilligan adeegsadaa Waqtiga Dhexe ee Yurub ama CET (Waqtiga Dhexe ee Yurub), oo u dhigma UTC + 1
Xilliga kuleylaha waqtiga UTC + 2 (oo loo yaqaan CEST) ayaa la adeegsadaa, iyadoo la raacayo qawaaniinta Beesha Yurub si looga faa'iideysto iftiinka qoraxda
Jasiiradaha Canary had iyo jeer way ka yar yihiin jasiiradda (UTC + 0 xilliga qaboobaha iyo UTC + 1 xagaaga)
Ku jawaab fanta
In kastoo ay umuuqato waxqabad aad ufiican, ma awoodi doono inaan kaqaybqaato, taas oo keenaysa su'aasha xigta.
Fiidiyowga aqoon isweydaarsigu ma ku jiri karaa shabakadda? si aan u daawan karo iyaga oo daahay (markii waqtigu ila gaaro)
Waxay noqon doonaan wada hadal maqal ah. Dhammaan boodhadhka iyo qoraallada waa la sii dayn doonaa, in kasta oo waxa xiisaha leh ay tahay in si toos ah looga qayb qaato maaddaama aqoon-isweydaarsiyadu ay la socdaan ttycast-ka oo codka laftiisu aanu la mid ahayn joogitaanka halkaas ee la arkayo sida wax u socdaan si toos ah.
Salaan iyo mahadsanid Desdelinux daabacaadda. Waxaan la wadaagi doonnaa khibradaha u dhexeeya dadka kala duwan ee ka kala yimid qaybaha kala duwan ee adduunka. Waxaan rajeynayaa khibrad wanaagsan oo qurux badan :).
Haa, waxaan u maleynayay inay ku duubi doonaan maqal iyo muuqaal, iyo dabcan, kaliya maqalka ayaa ku filan in lagu lumiyo qeybta codeynta, waad ku mahadsan tahay jawaabta si kastaba ha noqotee.
Edith rivas dijo
Waxay noqon doontaa mid xiiso badan.
Jawaab Edith Rivas
Mario Gomez dijo
Cinwaanka iimaylku ma shaqeynayo 🙁
Jawaab Mario Gomez
Waa salaaman tahay, maxay yihiin aqoonta ugu yar ee farsamo ee loo baahan yahay? Mahadsanid 🙂
Paul sharafto dijo
Tijaabinta isticmaale-wakiil, waa inay ahaataa KDE on Arch Linux 😛
Jawaab Pablo Honorato
xiisaha leh waxaan bilaabay inaan arko /usr/share/qt4/mkspecs/qws/linux-powerpc-g++/qmake.conf waxaana helay:
qmake waa barnaamij si otomaatig ah u abuuraya sameynta waxyaabaha la isku qurxiyo.
qmake waxaa abuuray Trolltech (oo hadda ay iska leedahay Nokia), waana qayb ka mid ah qaabdhismeedka Qt.
Sida laga soo xigtay Wikipedia…
yaa leh nokia?
Wax ka jawaab
Abuur sumadaha farriinta ee Gmail